COVID-19: Manfacyada Shaqaalaha baaga-muudada la siiynayo xilliga Cudurka | LawHelp Minnesota
COVID-19: Manfacyada Shaqaalaha baaga-muudada la siiynayo xilliga Cudurka
Markii ugu dambeysay ee wax la soo geliyey: 2021/1/15
Hadii shaqadaadda uu saameeyn ku yeeshay cudurka COVID-19, codso manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo markiiba. Waxay u badan tahay inay dhaqso badan tahay in lagu codsado khadka (apply online).
Gobolku waxa uu ku sameeyey isbedelo ku meel gaar ah sharciyada u degsan manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda noqda la siiyo. Ka eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits wixii akhbaar ah ee ku saabsan sharciyada caadiga ah ee manfacyada shaqaalaha baag-muudadda noqda la siiyo.
Bishii Deseembar 27, 2020, sharci cusub ayaa waxa uu wax ka bedelay Xeerka lacagta shaqaalaha shaqa la’aanta ah la siiyo.
Intooda badan dadka hela lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo waxa ay helaan $300 asbuucii oo siyaado ah. Minnesota waxa ay ka sugaysaa dhaqaale dowlada dhexe si ay u bixiso lacagahaa siyaadadda ah.
Haddii aad iskaa u shaqaysan jirtay ama aad tahay qandaraasle madax-banaan, waxa aad heli kartaa 11 asbuuc oo manfac ah oo siyaado ah.
Hadii aad ahayd shaqaaalaha W-2, sharci dowladu leedahay ayaa waxa uu ku siiyaa 13 asbuuc oo siyaado ah.
Sharciyada Caadiga ah ee Helida Manfacyada Shaqaalaha Baaga-muudada ah
Caadiyan, si aad u hesho manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo, waa khasab inaad awoodo, aadna diyaar u tahay, aadna si firfircoon u raadinayso shaqo. Inta badan awoodida, diyaar u ahaanta, iyo si firfircoon shaqo u raadintu macnaheedu waa:
Awoodid: waa inaad maskax ahaan iyo jir ahaanba shaqo diyaar ugu tahay.
Diyaar ahaanta: waa inaysan ka jirin noloshaada wax saameyn kara awoodaadda aad ku shaqeyn kartid, sida iskuul dhigasho, ama daryeelida qof jiran oo ehel ah.
Si diiran u raadinta: Waa inaad shaqo raadiso inta ay kuu socoto UI du. Kaliya uun shaqooyinka aan caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga aan khatarta galinayn ayaa la rabaa inaad raadiso.
Caadiyan, ma aad qaadin kartid lacagta shaqaaladaha baaga-muudadda ah la siiyo hadii aad iskaa u shaqaysto ama aad tahay qandaraasle madax-banaan. LAAKIIN, sharci cusub ayaa u oggolaanaya iskii u shaqeystayaal ama qandaraasleyaal madaxbannaan inay lacag ka helaan shaqaalaha sumcad leh.
Siddee ayaan u codsadaa manfaca shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo?
Waa aad ka codsan katrtaa lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta la siiyo khadka (online), Axadda, ilaa iyo Jimcaha, 6:00 subaxnimo ilaa iyo 8:00 fiidnimo., ee www.uimn.org.
Hadii aad doonayso inaad ku codsato telefanka, waqtiga kaliya ee aad soo wici kartaa waa Jimcayaasha, 8:00 subaxnimo – 4:30 galabnimo.
Agagaarka Magaalooyinka Mataanaha ah (Twin Cities): 651-296-3644
Meelaha dibada ah ee Minnesota: 1-877-898-9090
Isticmaalayaasha aalada (TTY) : 1-866-814-1252
Hadii aad rabto Af-Soomaali Riix 4.
Waxaa sidoo kale jira jadwal kale hadii aad doonayso inaad telefoonka kula hadasho adeega macmilka. Isticmaal liinkigan (link) si aad u eegto waqtiyada loo kala wacdo su’aalaha kala duwan: https://www.uimn.org/applicants/contact-us/index.jsp
Ciddee heli karta manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda noqda la siiyo?
Waa aad heli kartaa manfactada shaqaalaha baaga-muudadda la siiyo hadii:
Aad tahay shaqaale. Shaqaalaha waxaa la siiyaa foomka canshuurta ee la yiraa W-2. Shaqaalahu waa ay heli karteen manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda ah la siiyo ka hor sharciyada cusub walina waa ay heli karaan.
Aad tahay qof iskii-u-shaqeysta. Tusaale ahaan, hadii aad ganacsi leedahay. Dadka iskood u shaqeysta waa ay heli karaan manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo ilaa iyo bisha Maarso 13, 2021.
Aad tahay qandaraasle madax-banaan. Qandaraaslayaasha madaxa-banaan waxa la siiyaa foomka canshuurta ee 1099 ka. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qoraa iskii u shaqaysa, ama timo-jarre ama timo-hagaajiye kursi kireysta oo la siiyo foomka canshuurta ee 1099 ka. Intooda badan qandaraaslayaasha madaxa-banaani waxa ay heli karaan manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo ilaa iyo bisha Maarso 13, 2021
Waa aad heli kartaa manfacyada baaga-muudadda xataa haddii aad shaqeyn jirtay saacado-yar (part-time).
Waa maxay xeerarka dadka iskood u shaqeysta iyo qandaraaslayaasha madaxa-banaan?
Dadka iskood u shaqeysta iyo Qandaraaslayaasha madaxa-banaan waxa ay xaq u leeyihiin qaadashada barnaamijka manfacyada Gargaarka ee shaqaalaha shaqo la’aanta ah loo siiyo Cudurkan Dillaacay awgii (PUA). Waxaa aad heli karaa Dhaqaalaha la yiraa (PAU) haddii aadan xaq u lahayn manfacyada caadiga ah ee shaqaalaha shaqo la’aanta noqda la siiyo.
Gobolku waa khasab inuu xaqiijiyo shaqadaadda iyo dakhligaagga ka hor inta manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo aysan kuu bilaabin. Waxa ay kuu soo diri doonaan warqad hadii aad xaq u yeelato manfaca.
Lacag intee ah ayaan heli doonaa?
Badanaa, waxaa aad heli kartaa qiyaastii kala barow bar lacagtii aad ku shaqeyn jirtay kolkii aad shaqo la’aanta noqotay.
Waxaa jira sharci cusub oo COVID-19 ka ku saabsan oo u ogolaada dadku inay helaan wuxuun lacag siyaado ah asbuuc walba oo wehelisa lacagtooda manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo ee joogtada ah. Intooda badan dadka hela lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo waxa ay helaan $300 asbuucii oo siyaado ah. Minnesota waxa ay ka sugaysaa dhaqaale dowlada dhexe si ay u bixiso lacagahaa siyaadadda ah. Halkan mar kale dib uga eeg wixii akhbaar ah ee kale ee soo kordha.
Hadii aad tahay shaqaale (waxaa heshaa foomka W-2)
Waxa aad ka arki kartaa qiyaas ah manfacyada joogtada shaqaalaha shaqo la’aanta noqda la siiyo hadii aad isticmaasho MN Unemployment Insurance Benefits Estimator.
adii aad iskaa- u shaqaysto ama aad tahay qandaraasle madax-banaan (waxaa lagu siin foomka canshuur celinta ee 1099):
Waxay ka xisaabiyaan cadadka rasmiga ah ee aad helayso dakhliga go’an ee ku soo galay ee canshuur-celintaadii ugu dambaysay, haddii ay ku soo gashay $24,340 ama ka yar canshuur-celintaadii ugu dambayay, waxaa heli $234 asbuucii.
Ma inaan canshuur ka bixiyaa manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta la siiyo?
Haa. Manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo waxay u xisaabiyaan dakhli la canshuurayo dowlada dhexe iyo gobolkuba.
Manfacyada caadiga ee shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo, waad oran karaa ha la iga“reebo” canshuurta. Hadii aad taa sameyso lacagta aad qaadanaysaa waa ay yaraan, laakiin, uma badna inaad u baahato inaad canshuur kale ka bixiso manfacaaga kolka aad canshuurta xareysanayso.
Haddii aad tahay qof iskii u shaqaysta ama qandaraasle madax-banaan ah, mancfyada shaqaalaha shaqo la’aanta la siiyo waxa aad ka heshaa Barnaamijka Gargaarka Shaqaalaha Shaqo La’aanta ah (PUA). Manfacyada PUA da waa la canshuuraa, laakiin canshuur lagama reebi karo kolkaa.
Dad badani waxa ay heli jireen markii hore $600 oo siyaado ah asbuucii, markii dambana waxaa looga dhigay $300 asbuucii. Lacagta siyaadada ah waa la canshuuraa.
Horaanta 2021, xafiiska manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ahi waxa uu kuugu soo diri doonaa foomka canshuurta ee (IRS Form 1099-G) ciwaankii ugu dambeeyey ee lagaa hayey. Foomka waxaa ku qornaan doonta intii macfayada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo ee aad heshay 2020 iyo intii canshuur ahayd ee lagaa reebay. Waxa aad isticmaali lambaradaa kolka aad xareysanayso canshuurtaadda sannadka soo socda.
Muddo intee le’eg ayey ii socon kartaa manfacyada baaga-muudaddu?
Inta ay tahay mudadda aad heli karo lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta la siiyaa waxa ay ku xiran tahay nooca shaqadii aad qaban jirtay kolkii hore iyo dhowr waxyaabood oo kale.
Hadii aad iskaa u shaqeysan jirtay ama aad ahayd qandaraasle madax-banaan:
waxa aad heli 11 asbuuc oo siyaado ah, laga bilaabo asbuuca bilaambmaya bisha Deseembar 27, 2020 hadii ay kaa dhamaatay xisaabta lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo.
Dadka badankiisu uma baahna inay wax sameeyaan si ay u helaan lacagta 11 asbuuc ee siyaadada ah. Kaliya sii wad inaad u dalbato macfacyada asbuucii sidii caadiga ahayd.
Haddii aadan helin lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo muddo, waxaa dhici karta inaad u baahato inaad xisaabtaada aad dib u soo furatao.
​​​​​​​Hadii aad ahayd Shaqaalaha ku shaqeeya W-2:
waxa aad heli 13 asbuuc oo siyaaddo ah hadii ay kaa dhamaatay lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo AMA qorshahu ahaa inaad hesho jeegii ugu dambeeyey manfaca asbuuca bilaabmayey bisha Desemabar 20, 2020
Dadka badankiisu uma baahna inay wax sameeyaan si ay u helaan lacagta 13 asbuuc ee siyaadada ah. Kaliya sii wad inaad u dalbato macfacyada asbuucii sidii caadiga ahayd.
Xataa haddii aad ahayd shaqaale ku shaqeeya W-2 waxaa jira waxyaabo laga reebo helida 13 asbuuc ee siyaadda ah. Ma aad heli kartid waqtiga siyaadadda ah hadii:
aad ku heshay lacagta shaqaalaha shaqo la’aanta la siiyo sabab ah in shaqo laguugu baaqay in lagu siiyo ama shaqo lagu siin lahaa lagaala noqday iyadoo sababtu tahay COVID
guriga ayaad iska fadhiday iyadoo sababtu tahay COVID-19. Tusaale ahaan, hadii aad ku jirto dadka sida khaaska ah khatarta ugu ah cudurkan dillaacay aadna haysatay warqad dhaqtar oo oronaysa ma aha inaa shaqayso, karantiil lagu geliyey, ama aad daryeelaysay qof ehel ah oo qabay COVID
lacag dheeraad ah aad qaadatay iyadoo sababtu tahay been sheegid
inaad ahayd shaqaale diineed oo ku helay manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo sharciga (CARES Act) awgii.
Ka waran hadii la iigu yeero shaqadii aanana u malaynayn inay amaan tahay shaqaddu?
Shaqadaaddu waa inay lahaato qorshe si adiga iyo dadweynahuba aad amaan u heshaan. Hadii aysan amaan ahayn inaad ku noqoto shaqada sababta oo ah shaqadaaddu oo aan lahayn qorshe amaan ama aan u hogaansamayn nidaamka, waxaa dhici karta inaad sii qaadan karto manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo. Akhri warqadayada xaqaa’iqa ah ee COVID-19: Amaanka Shaqada iyo Shaqo ku noqosahda.
Hadii aysan amaan ahayn inaad shaqada ku noqoto iyadoo sababatu tahay khatar weyn oo aad u tahay COVID-19 ama qof aad la nooshahay oo khatar weyn u ah, waxa aad codsan kartaa “maciin macquul ah.” Maciinka macquulka ahi waa wixii kuu ogolaan kara inaad shaqadaadda qabsato iyadoo laguu fidinayo caawimaad siyaado ah ama wax isbedel ah. Hadii shaqadaaddu aysan ku siinin wax maciin macquul ah waxaa dhici karta inaad sii qaadan karto manfacyada shaqaalaha shaqo la’aanta ah la siiyo. Akhri warqadayada xaqaa’iqa ah ee Maciinada Macquulka ah ee shaqada (COVID-19: Reasonable Accommodations at Work).
AADAN U SHAQEYN KARIN SABAB LA XIRIIRTA COVID-19
Hadii shaqadaadda hadda ay xiran tahay iyadoo sababtu ay tahay cudurka COVID-19
Ka war hay shaqadaada si aad u ogaato kolka aad shaqada dib ugu noqon doonto. Tani waxa ay kuu geli meeshii “shaqo raadintii” la iska rabi lahaa.
Qor kolkii aad la xiriirto shaqadaadaba, iyo waxa ay kugu yiraahdaanba, iyo wixii akkhbaar ah ee ay ku siiyaan.
Hadii saacadahaagii la yareeyey iminka iyadoo sababtu tahay cudurka COVID-19
Uma baahnid inaad shaqo raadiso. Kala hadal shaqadaadda kolka ay saacadahaagu dib ugu noqdaan sidii hore inay kugu filan yihiin iyo in kale.
Hadii shaqadii la xiray ama shaqo laguu waayey ayna arrintaasi tahay mid rasmi ah
Sharciyadii hore wax iskama bedelin. Eeg warqadayada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits. Ma aha inaad sameyso wax shaqo raadis ah oo khatar gelin kara caafimaadkaaga ama caafimaadka qoyskaaga.
Hadii shaqada adigu aad iskaa uga tagtay ama fasax aad ka qaadato iyadoo sababtu tahay inaad wayday cid ilmaha kuu haysa ama iskuulkii ilmahaaga la xiray iyadoo sababtu tahay cudurka COVID-19
Sharciyaddii hore isma bedelin. Waa inaad raadsataa cid kale oo ilmaha kuu haysa ama aad waydiisato shaqadaadda inay intii macquul ah ay kula shaqeeyso ama ay saacadaha kaa bedelaan ka hor inta aadan shaqada ka tagin. Eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits.
Waa inaad raadiso shaqooyin kuu ogol inaad guriga adigoo jooga shaqeyso ama aad shaqeyso kol qof kale uu kuu hayn karo ilmahaaga.
Haddii aysan jirin wax shaqooyin ah oo aad iminka qaban karo, iska codso. Hadii laguu diido ama aad u baahato talooyin kale fadlan la xiriir (contact Legal Aid).
Hadii shaqada adigu aad iskaa uga tagtay ama aad fasax ka qaadatay si aad u hayso qof ehelkaa ah oo uu ku dhacay cudurka COVID-19
Waa inaad raadiso shaqooyin kuu ogol inaad guriga adigoo jooga shaqeyso ama aad shaqeyso waqti uu qof kale hayn karo qofka ehelkaa ah ee xanuusan.
Hadii laguu diido ama aad u baahato talo kale fadlan la xiriir (contact Legal Aid)
Hadii shaqadda aad uga tagtay iyadoo sababtu tahay in qoladda shaqadu ay ku waydiisatay inaad sameyso wax aad is tiri khatar weeye waayo cudurkan COVID-19 (sida la macmilka dadweynaha iyadoon aysan jirin wax ka taxadar ah oo la raacayo)
Sharciyaddii hore isma bedelin. Eeg warqada xaqaa’iqa ee shabakada Unemployment Benefits.
Hadii aad jiran tahay ama aad ka mid tahay dad si gaar ah ugu nugul cudurka ayna noqotay inaad shaqada ka tagto ama fasax ka qaadato cudurka COVID-19 awgiis
Hadii dhaqtarkaaga ama daryeel bixiyaashaada caafimaad ay kugula taliyaan inaad guriga joogto iyadoo sababtu tahay inaad jiran tahay ama aad la mid tahay si gaar ah ugu nugul cudurkan, waa in lagu siiyo manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda ah la siiyo. Hubi inaad warqad dhaqtar hesho.
Khasab kuguma aha kolkaa inaad shaqo raadiso
Sideen ku ogaadaa isbeddelada mustaqbalka?
Waxa dhici karta inay jiri doonaan isbedelo kale oo lagu sameeyo manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda ah la siiyo kolka aan wax ka sii ogaano cudurka COVID-19 iyo sida faafidiisu u saameynayso Minnesota. Fadlan booqo shabakada Waaxda Shaqada iyo Horumarinta dhaqaalaha ee Minnessota (Minnesota Department of Employment and Economic Development) si aad uga ogaato wixii ku soo kordha ee ku saabsan manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo iyo cudurka COVID-19 https://www.uimn.org/applicants/language/somali.jsp.
Akhbaar ku saabsan Muhaajiriinta
MA QAADAN KARTID manfacyada shaqaalaha baaga-muudadda ah la siiyo hadii aadan haysan warqada shaqada ee looga shaqeyn karo wadanka United States. Kaliya lacagtii aad kasbatay kolkii aad haysatay ogolaanshaha inaad shaqeyn karo ayaa la xisaabin.
Hadii aad haysato warqad shaqo, waad aad heli KARTAA manfacyada shaqaalaha baaga-muudada ah la siiyo. Waa aad haystaa warqadda ogolaanshaha shaqada hadii aad tahay qof leh sharci degnaansho sharci ah, aad haysto fiisahaha shaqo ogolaanta ama aad haysato warqad shaqo.
Manfacyada baaga-muudadda laguma darro xisaabta xeerka cayr qaadadka (public charge rule).